Yuunivarsitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barsiisota lamaaf piroofersera guutuu kenne – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Yuunivarsitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barsiisota lamaaf piroofersera guutuu kenne
On Aug 1, 2020 167
Finfinnee, Adoolessa 25, 2012 (FBC) – Yuunivarsitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barsiisota lamaaf piroofersera guutuu kenne.
Yuunivarsitichi gulantaalee garaagaraan digirii jalqabaa hanga pirooferserummaattis barsiisuun eebbisuuf eegaleera.
Guyyaa har’as,barsiisota yuunivarsitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa lama piroofeesera guutuun eebbiseera.
Piroofeesera guutuun yuunivarsiticha keessaa kanneen eebbifamanis,piroofeeser Asaffaa Abbaa Muunaa fi piroofeeser Amaan Dhaqqabooti.
Pireezidaantiin Yuunivarsitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dooktar Lammii Guutaa,yuunivarsitiin keenya hojii cee’umsa teeknolojii fi tiraanisfoormeshinii cimsuuf hojjetaa jiruun hanga yoonaatti sadarkaa PHD’n namoota 30 eebbiseera,kanaan cinatti immoo yeroo jalqabaaf piroofesera guutuun barsiisota lama eebbiseera.
Fuuldurattis hojii baruu fi barsiisuu cimsuuf yuunivarsitiiwwan biyyoota garaagaraa waliinis jabinaan hojjetaa jiraa jedhan.
Eebba piroofeserummaa guutuu kana irratti Kan argaman,Daarektera olaanaa Ejensii Odeeffannoo fi Tika Nageenya Biyyaalessaa fi hoji geggeessaa olaanaa bordii Yuunivarsitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dr.Shuumatee Gizaaw,yuunivarsitiin Kun hojiiwwan qorannoo biyyaf ooluu dandaa’an Kan dhaabbilee barnootaa garagaraa hojjetaniini cinatti addatti akka hojjetuuf deeggersa barbaachisaa ni taassifanaa jedhan.
Kanneen har’a eebbifamtan immoo dhaloota borii qaruu irratti jabaachuu qabduus dhaamaniiru jechuun Afawarq Iyyaayyuutu gabaase.
Ijaarsi Hidha haaromsaa haqqummaa biyyoota yaa’insaa fi fayyadamummaa waliinii kan…
Tatamsa’ina vaayrsii koroonaa ittisuuf odeeffannoowwan hubannoo hawaasaa…
Muummeen Ministiraa Dooktar Abiy Ahimad Ministeera Maallaqaa daawwatan
Naannoo Oromiyaatti gabaasa qorannoo sa’aa 24 darbeetiin namoonni 202 vaayrasii…
Manni murtichaa dhimma Gaazeexeessa Guyyoo Waariyooratti…
MM FDRI Dooktar Abiy jiraattoota biyya ijaaruuf halkanii…
Gaazexeessaa, Artiistii fi qorataan guddina Afaan Oromoo…
Naannoo Oromiyaatti gabaasa qorannoo sa’aa 24 darbeetiin…
Ijaarsi Hidha haaromsaa haqqummaa biyyoota yaa’insaa fi…
Tatamsa’ina vaayrsii koroonaa ittisuuf odeeffannoowwan…
Muummeen Ministiraa Dooktar Abiy Ahimad Ministeera Maallaqaa…
Oduu biyya keessaa2409